जान्नुहोस् : पायल्सको उपचारको लागि लेजर सर्जरी कति सुरक्षित छ ? थप उपचार के के हुन् ? « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
पायल्स पछिल्लो समयमा आम मानिसलाई समस्याको रुपमा देखिएको छ । बदलिदो बातावरण साथै खानपिनको समस्याको कारण पनि पायल्सको विरामी नेपालमा बढ्दो देखिएको छ ।
पायल्स यस्तो रोग हो जसले जुनसुकै बेला पीडा दिन सक्छ । समयमा नै उपचार भएन भने यसले निकै समस्यामा पार्न सक्छ ।
पछिल्लो समयमा काठमाडौं साथै देशका मुख्य शहरका सडक किनार, भित्ता वा होर्डिङ बोर्ड जता पनि ‘पायल्सबाट छुटकारा पाउन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्’ भनेर लेखिएको पाइन्छ । तर विज्ञापनमा लेखिए जस्तै पायल्सबाट छुटकारा पाउन त्यति सहज छैन । पायल्स उपचार गर्ने धेरै तरिका छन् । यसको उपचारका लागि शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ भने औषधिको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
के पायल्सको उपचारका लागि लेजर सर्जरी गराउनु सही हो त ?पायल्स बढ्दै गएर अत्यधिक पीडा हुन थालेपछि शल्यक्रिया गर्ने सल्लाह दिइन्छ । पायल्स दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा भित्री रूपमा बढ्दै जान्छ भने अर्को बाहिर देखिन्छ ।
बाहिर देखिने पायल्समा ससाना दाना जस्तो मासुको केही भाग बाहिर देखिन्छ । त्यसलाई शल्यक्रियामार्फत उपचार गर्न सकिन्छ । यसका लागि कुन शल्यक्रिया प्रभावकारी हुन्छ भनेर बिरामीहरूको मनमा खेलिरहन्छ ।
यस्तोसमस्यामा चिकित्सकहरू खुला शल्यक्रिया गराउँछन् भने दोस्रो लेजर सर्जरी गराउने गरिन्छ ।खुला शल्यक्रियामार्फत पनि रोगको उपचार गर्न सकिन्छ । तर यो प्रक्रिया जटिल र पीडादायी हुन्छ ।
तर खर्च कम लाग्छ । शल्यक्रियापछि निको हुन पूरा एक हप्ता लाग्छ । दोस्रो उपाय हो– लेजर सर्जरी । पछिल्लो समय लेजर सर्जरीलाई सहज रूपमा लिन थालिएको छ । लेजर सर्जरीमा तेज प्रकाशको किरणमार्फत पायल्सको उपचार गरिन्छ ।
यो सर्जरीमा पलाएको मासुमा स्टेपल गरिन्छ । यसले मासुको सानो भागमा हुने रक्तसञ्चार बन्द गरिदिन्छ । यो सर्जरीपछि केही दिनमा नै पायल्सबाट छुटकारा मिल्छ । यो सर्जरीपछि पनि पुनः मासु पलाउने सम्भावना हुन्छ ।स्वास्थ्य पत्रपत्रिका